‘प्रेम प्रस्ताव राख्नु केटाहरुको एटिच्युड नै हो’ « Drishti News – Nepalese News Portal
‘प्रेम प्रस्ताव राख्नु केटाहरुको एटिच्युड नै हो’
१२ भाद्र २०७८, शनिबार 12:07 pm
कोरोना महामारी अघिसम्म गायिका सहिमा श्रेष्ठलाई भ्याइनभ्याई थियो । ‘स्टेज पर्फमेन्स’मा फरक शैलीसहित सांगीतिक करिअरलाई उचाइ दिइरहेकै बेला महामारी फैलियो । महामारी नभए उनी यो समयमा ‘स्टेज क्वीन’का रुपमा देश–विदेशका स्टेजमा व्यस्त हुन्थिन् । पाश्र्र्वगायनमा समेत जमेकी सहिमा पनि महामारीसँगै घरमै छिन् । प्रस्तुत छ, सहिमासँग एमपी सुब्बाको जम्काभेटः
हिजोआज दिन कसरी बित्दैछ ?
घरमै बसेर दिन बित्छ । घरमा रियाज गर्दै बस्यो, दिक्क लाग्यो भने यु–ट्युबमा भिडियो हेर्ने हो । कोरोना महामारीका कारण बाहिर निस्किनै डर लाग्छ । केही दिन यताचाहिँ फाट्टफुट्ट रेकर्डिङहरु सुरु गरेकी छु ।
तीज नजिकिँदैछ, के छ योजना ?
कोरोनाको डर कायमै छ । त्यसैले केही योजना बनाएकी छैन । पोहोर साल पनि कोरोनाका कारण तीजमा कुनै कार्यक्रम भएन । तीज गीतचाहिँ ल्याएकी थिएँ । यसपाली त नयाँ तीज गीत पनि ल्याइनँ । कुनै कार्यक्रम पनि छैन । यसपाली पनि तीज घरमै मनाउने हो ।
कोरोना महामारी अघिसम्म ‘स्टेज क्वीन’का रुपमा चम्किँदै हुनुहुन्थ्यो । महामारीले त्यो यात्रामा ब्रेक लगाया होइन त ?
कोरोना महामारीबाट प्रभावित नहुने क्षेत्र नै छैन । व्यापार, व्यवसाय प्रभावित भएसँगै विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराएको अवस्थामा म पनि प्रभावित भएँ । विश्व मानव जीवन नै संकटमा पुगेको समय स्वाथ्य रहनु नै ठूलो कुरा भएको छ ।
श्रोता/दर्शकबाट पाएको ‘स्टेज क्वीन’को उपाधि स्थापित गर्ने अवसर गुम्यो नि ?
गुमेको छैन । गुमेजस्तै चाहिँ हो । कोरोनाकाल सुरु भएको दुई वर्ष बित्न लाग्यो । त्यसयता स्टेज चढ्ने अवस्था छैन । म मात्र होइन, आमकलाकारलाई नै हो । गायन क्षेत्रका कलाकारका लागि स्टेज कार्यक्रम प्रमुख आयस्रोत हो । नेम र फेमका लागि पनि कलाकारलाई स्टेज आवश्यक छ । तर, कोरोनाले खतम बनायो ।
नाम कमाएकै छ । त्यो मौका फेरि आउँछ भन्ने आशा होला नि ?
आशा छ । तर, यो महामारी कहिलेसम्म हो, त्यो निश्चित छैन । गीतसंगीत क्षेत्र विशेषगरी स्टेज कार्यक्रमको ट्रेण्ड पहिलेकै अवस्थामा आउन अझै समय लाग्छ जस्तो छ । सामान्य अवस्थामा आएपछि सबै ठीक हुन्छ ।
पछिल्लो समय आफ्नो जीवनशैलीमा के परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
समयअनुसार केही चेञ्ज हुने प्रयास गरेकी हुँ । समयअनुसार चल्न जानिएन भने पछि परिन्छ भन्छन् नि । त्यसैले आफूलाई केही फ्रेण्डली बनाएकी हुँ । यो कलाकारितामा आवश्यक पनि छ ।
स्टेज पर्फमेन्स गर्दा दर्शकलाई खुबै नचाउँनुहुन्छ । डान्समा तपाईंको रुचि हो ?
मलाई सानैदेखि डान्समा रुचि थियो । डान्स गर्थे पनि । तर, स्टेजमा देखाउने अवसर मिलेको थिएन । स्टेज कार्यक्रमका लागि अफरहरु आउन थालेपछि नाच्दै गाउने शैली अपनाएकी हुँ । जुन दर्शकले रुचाएका पनि छन् ।
गायनको क्रममा कुन–कुन देश पुग्नुभयो ?
धेरै देश गएँ । खाडीका सबै देश र मध्य पुर्वका देशहरु । सांगीतिक युरोप टुर पनि गरेकी छु । भन्नैपर्दा अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडाबाहेक विश्वका अधिकांश देश पुगेजस्तो लाग्छ ।
अहिलेसम्म कति गीत गाएँ भन्ने गन्ती गर्नुभएको छ ?
छैन । सुरु सुरुमा संख्या गनिन्थ्यो । विस्तारै गन्नै छाडियो । समग्रमा चलचित्र गीतसहित तीन सयभन्दा बढी भयो होला ।
गायन क्षेत्रमा खुसी हुनुहुन्छ ?
खुसी छु । यही क्षेत्रमा लागेर नेम र फेम पाएकी छु, दर्शक तथा श्रोताको अगाध माया पाएकी छु । मेरो लागि यही नै खुसीको कुरा हो ।
देश–विदेश घुमिरहँदा केटाहरुले कति प्रेम प्रस्ताव राख्छन् ?
आउँछ । अर्को कुरा, केटीहरुलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु त केटाहरुको एटिच्युड नै हो । तर, म यसलाई सकरात्मक रुपमै लिन्छु । प्रेम प्रस्ताव राख्दैमा केही बिग्रिजाने होइन । त्यो कसरी लिने आफूमा भरपर्छ ।